Frances Pew Hayes Center for Lifelong Learning »Jaamacadda Hodges
Categories: Barashada Nolosha oo dhan
Barashada Weligeed Ma Fariisto
Bulshada Frances Pew Hayes ee Barashada Cimriga
Barnaamijyo Loogu Talo Galay Dadkaaga Degan Maskaxda
Jaamacadda Hodges waxay aaminsan tahay qiimaha iyo faa'iidooyinka geedi socodka barashada nolosha oo dhan. Iyadoo la ilaalinayo himiladaas, waxaan u qorsheynay barnaamijyada kaqeybgalka dadka deegaankaaga oo ay ka mid yihiin mowduucyo ay ka mid yihiin farshaxanka iyo dhaqanka, arrimaha socdaalka iyo safarka, sayniska iyo deegaanka, tikniyoolajiyadda la qabsiga, iyo caafimaadka iyo caafimaadka.
Wada shaqeynta, waxaan u abuuri karnaa barnaamij loo habeeyay dadka deegaankaaga kaas oo ka dhigaya kuwo firfircoon oo ku mashquulsan.
In kasta oo aan aaminsanahay barnaamijyadeennu inay ka faa'iideystaan ​​dadka deegaanka, haddana waxay siinayaan xasillooni maskaxeed markay dooranayaan xaruntaada maadaama hawlgelinta la muujiyey inay tahay qodob muhiim ah marka la dooranayo bulsho weyn oo nool. Nala soo hadal maanta si aan u aragno sida aan kuu caawin karno.
Waxaan qabanaa qorsheynta. Deganayaashaada ayaa ka hela barnaamijyada. Adiguna waad ku qanacsan tahay natiijooyinka wanaagsan.
La xiriir Wakiilka Barashada Cimriga Dheer
Cimri Dheer. Faa'iidooyinka aan dhamaadka lahayn.
Daraasado badan ayaa muujinaya in barashada cimriga oo dhan ay bixiso faa'iidooyin aan dhammaad lahayn. Jaamacadda Hodges, waan ku raacsanahay! Waxaan bixinaa barnaamijyo ay hogaaminayaan khubaro aqoon uleh, shahaado haysta, shati haysta, ama khibrad laxaqiijiyey si ay ula wadaagaan aqoontooda.
Waxay kobcisaa howlaha maskaxda ee caafimaadka qabta
Hnoo ogolaan inaan u isticmaalno aqoonta siyaabo macno leh
Iwuxuu xiraa fikirka adag iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka
Waxay sahlaysaa barashada joogtada ah maxaa yeelay shaqooyinku uma baahna aqoon durugsan
Hiskuday naftaada dhisida hawlgab & baro siyaabo cusub oo looga dhigo kan ugu dambeeya
Waxaa laga yaabaa inuu sare u qaado caafimaadka iyo caafimaadka
Iheerarka tamarta oo kordha
Rheerarka waxbarasho ee niyad-jabka
Lka badnaanta halista wadno qabadka & istaroogga
Pisku xidhka jaceylka
Waxay xoojisaa is-kalsooni
Bartayaasha cimrigoodu way faraxsanyihiin oo cimri dheereeyaan!
Farshaxanka (Tiyaatarka & Muusikada)
Farshaxanka, Farshaxanka & Sawirka
Arimaha hadda jira, (maxalli, qaran, caalami ah)
Caafimaadka, Caafimaadka & Jimicsiga
Koritaanka Shakhsi ahaaneed
Sayniska & Deegaanka
Safarka & Dib u eegista
Xafiiska: (239) 598-6143